Madaxweynaha Dalka Mexico oo Donald Trump u Sheegay in Dalkiisa uusan Bixin Doonin Lacagta Derbiga Lagu Dhisayo (VIDEO) - Hablaha Media Network
Madaxweynaha Dalka Mexico oo Donald Trump u Sheegay in Dalkiisa uusan Bixin Doonin Lacagta Derbiga Lagu Dhisayo (VIDEO)
HMN:- Madaxweynaha dalka Mexico oo kulan la qaatay Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa kulan kaasi ugu sheegay in dalkiisa uusan bixinayn wax lacag ah oo derbi lagu dhiso.
Donald Trump ayaa Magaalada Mexico City u tagey, sidii uu madaxweynaha dalkaasi ugala xaajoon lahaa qorshaha uu dhabarka ka riixaayo, ee ah in darbi laga dhiso xuduuda kala qaybisa dalka Mareykanka iyo Mexico.
Shir jaraa’id oo si wadajira ay u qabteen labada xubnood, ka dib markii uu u soo idlaaday kulan ay ku yeesheen Caasimadda Mexico, ayaa waxay ku faah faahiyeen waxyaabihii ay isla soo hadalqaadeen.
Donald Trump ayaa sheegay in Madaxweynaha Mexico uu kala hadlay qorshaha uu Xisbiga Jamhuuriga ku doonaayo, sidii darbi kala qaybiya labada dalka looga dhisi lahaa xuduuda iyo sidii loo soo celin lahaa dadaka sharci daradda ku jooga dalk Maraykanka oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Mexico.
Donald Trump ayaan shirka jaraa’id ka sheegin in Mexico ay bixin doonto dhaqaalaha ku baxaaya dhismaha darbigan, laakiin ka hor intii aanu u amba bixin Magaalada Mexico City, ayuu Magaalada Phoenix ee Gobolka Arizona uu ka sheegay in Xukuumadda Mexico City ay bixin doonto qarashka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inaanu Mareykanku aqbali karin dadka reer Mexico ee ka soo gudbaaya xuduuda, iyadoo uu Dowladda Mexico ugu yeeray inay kala shaqayso, sidii lagu hakin lahaa qulqulka dadkeeda.
Madaxweynaha Mexico, ayaa waxaa uu isna shaaciyay in Donald Trump uu u sheegay inaanay Xukuumadda Mexico City bixin doonin dhaqaalaha ku baxaaya dhismaha darbigaasi.
Dhanka kale dadka reer Mexico ayay layaab ku noqotay booqashada uu Donald Trump ku tagey dalka Mexico, iyadoo dadku ay bannaabax balaaran ka dhigeen caasimadda dalkaasi ee Mexico City.